चयन वस्तुको एक वा बढी प्रतिलिपिहरू बनाउनुहोस्.
सम्पादन - नक्कलरोज्नुहोस्
वस्तुहरू नक्कल गर्दा
तपाईँले बनाउन चाहनु भएको प्रतिलिपिहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
चयन वस्तुको उचाइ र चौडाइ मानहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् X अक्ष र Y अक्ष बाकसहरूमा साथसाथै भर्ने रङ वस्तुको सुरु बाकसमा. चयन वस्तुको परिक्रमण कोण प्रविष्ट हुँदैन ।
चयन वस्तु सँग सम्बन्धित नक्कल वस्तुको स्थाति र परिक्रमण सेट गर्नुहोस् ।
चयन वस्तुको केन्द्र र नक्कली वस्तुको बीचमा तेर्सो दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् । वास्तविक मानहरूले नक्कली वस्तुको दायाँमा सिफ्ट गर्दछ र अवास्तविक मानहरू नक्कली वस्तुको बायाँमा सिफ्ट गर्दछ
चयन वस्तुको केन्द्र र नक्कली वस्तुको बीचमा तेर्सो दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् । वास्तविक मानहरूले नक्कली वस्तुको माथि सिफ्ट गर्दछ र अवास्तविक मानहरू नक्कली वस्तुको तल सिफ्ट गर्दछ ।
कोण (० देखि ३५९ डिग्रीहरू) प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँबाट तपाईँ नक्कली वस्तु परिक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ । वास्तविक मानहरूले नक्कली वस्तुलाई क्लकवाइजमा परिक्रमण गर्दछ र अवास्तविक मानहरूले काउन्टरक्लकवाइज दिशामा
नक्कली वस्तुको साइज सेट गर्नुहोस् ।
मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन बाट तँपाई नक्कली वस्तुको चौडाइ बढाउन वा घटाउन चाहनुहुन्छ.
तपाईँले नक्कली वस्तुको उचाइ बढाउन वा घटाउन चाहनु भएको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्
चयन गरिएको वस्तु र नक्कली वस्तुका लागि रङहरू सेट गर्नुहोस् । यदि तपाईँले एक भन्दा बढी प्रतिलिपि बनाउनु भयो भने, यी रङहरूले रङ ग्रेडियन्टको सुरु र अन्त्य बिन्दुहरू परिभाषित गर्दछ ।
चयन गरिएको वस्तुका लागि रङ रोज्नुहोस्
नक्कली वस्तुका लागि रङ रोज्नुहोस् । यदि तपाईँले एक भन्दा बढी प्रतिलिपि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, यो रङ अन्तिम प्रतिलिपिका लागि लागू गरिन्छ ।
Title is: नक्कल